Actualidad iPhone မှလူးဝစ် del Barco ၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်း | အိုင်ဖုန်းသတင်း
Luis del Barco သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ မှစ၍ ဆောင်းပါး ၄၀၀ ရေးသားခဲ့သည်
17 ဇူလိုင် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု - Insta360 Nano၊ ဓာတ်ပုံနှင့်ဗွီဒီယို ၃၆၀ ကိုသင်၏ iPhone ဖြင့်ဖမ်းယူနိုင်သည်
29 ဇွန် ဆယ်နှစ်ထုတ် - ၂၀၀၇ ပြန်သည်
16 ဇွန် iPhone အတွက်အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်း multiplayer ဂိမ်းများ
12 ဇွန် ယိုစိမ့်မှုအသစ်များအရဤအချက်သည် iPhone 8 ၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်သည်
11 ဇွန် ယခုတွင်သင်သည် YouTube ၌ WWDC သော့ချက်၏ဗွီဒီယိုအပြည့်အစုံကိုကြည့်နိုင်သည်
10 ဇွန် နားထောင်၊ နားထောင်ပါ။ Podcasts အက်ပလီကေးရှင်းသည်မကြာမီအဓိကတိုးတက်မှုများပါလိမ့်မည်
08 ဇွန် iOS 64 ၏အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ချက် ၆၄ ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်
06 ဇွန် iOS 11 ကို install လုပ်ဖို့စဉ်းစားနေပါသလား။ ဒီတစ်ခါလည်းစောင့်ရတာပိုကောင်းတယ်
05 ဇွန် New iPad Pro
05 ဇွန် အက်ပဲလ်ဂီတသည်ယခင်ကထက်လူမှုရေးပိုများလာသည်
05 ဇွန် Siri သည် iOS 11 တွင်သူမ၏အသံကိုရင့်ကျက်လာစေသည်
05 ဇွန် WWDC ပါ။ ဒါပေမယ့် hardware တွေအတွက်နေရာလည်းရှိပါတယ် - iMac အသစ်!
05 ဇွန် WWDC17 အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား ဒီဘင်ဂိုကစားကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးသင်ဖြစ်ပျက်ပြီးနောက်သင်ဖြည့်ပါ
17 မေလ Apple ၏ကျောင်းဝင်းသစ်ကိုသီးသန့်ကြည့်ပါ
11 မေလ သင်၏အသံမှတ်စုများကိုစာသားအဖြစ်သို့ချက်ချင်းပြောင်းလဲပေးသောအက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် raffle ဖြစ်သည်
09 မေလ အစီအစဉ်အပေါ်အာကာသ Make! ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့တွင် Apple ပွဲတစ်ခုကျင်းပခဲ့သည်
08 မေလ သင့် iPhone ကိုကော်ဖီသောက်ခိုင်းပါ
04 မေလ WhatsApp ကိုဆင်း? ငါတို့သိသောအရာဟူမူကား၊
28 .ပြီ တီထွင်ဖန်တီးမှုမရှိ ဒီအက်ပ်သည်သင်၏ဓါတ်ပုံများအားပိုမိုဆက်စပ်မှုဖြစ်စေ၊
26 .ပြီ နားကြပ်ကိုရိုက်သည်။ သူတို့ထိုက်တန်သလား။